Maxaa Lagu Qabtaa Canshuurta Dowlada Puntland? | SAHAN ONLINE
Maxaa Lagu Qabtaa Canshuurta Dowlada Puntland?
W/Q: Mohamed Bile Yusuf.
Economic & Banking Expert,
E-mail: Mohdbile10@gmail.com, Facebook:@Mohd Bile Yusuf
Canshuurtu waa lacag laga qaado shacab Dimuqaraadi ah, lacagtaas oo ay ka qaado dowlada dalka. Hadaba waxa iswaydiin mudan maxay ku qabataa dowlada lacagahaas? Hadan wax yar ka taabano Mesha ay ku baxaan lacagahaas iyo waxa loo isticmaalo. Dowladu waxay ku kabtaa lacagahaas canshuurta adeegyada bulshada oo ka kooban qodobada soo socda:-
Amaanka Calamiga ah (International security)
Amaanka Qaranka (National Security)
Sharciga iyo kala Dambeynta (law and order)
Shaqaalaha Dowlada (Government Employees)
Cafimaadka iyo Daryeelka (Healthcare and Welfare) iwm
Canshuurta, waa Dakhliga ama isha ugu muhiimsan federaal haday noqoto gobol iyo dowlada hooseba. Hadaba canshuurtu waa arin muhiimad gaar ah u leh shaqsi kasta oo nolol wanaagsan jecel.
“Dowlad Hadaysan Jirteen Canshuur Ma Jirteen, Canshuurna Hadaysan Jirin Dowlad Ma jirto”.
Hadaba Akhristow, Canshuurta dowlada Puntland waa mid ka mid ah siyaabaha dhowrka ah ay dowladu ku hormariso adeegyada bulshada taasi oo ay balanqaaday inay hormariso. Akhristow sideynu ognahay Dawlada Puntland ma ahan mid wax soo saarkeedu badanyahy, Sidaa owgeed waa in ay ku tiirsanantaa Canshuurta dhacabka.
Dawladu waa ka duwantahay ganacsiga marki la eego xaga dhaqaalaha waayo ganacsigu wuxu leeyahay wax soo saar iyo fa’iidooyin, waxa intaa sii dheer dowladu malahan mushaar (wages) ama maalgashi dakhli ka soo gala (investment income) sida shaqsiga ama qoyska oo kale. Madaama dawladu aysan haysan ilo dhaqaale oo dakhli ka soo gala, Waa in ay xooga saartaa qaadista Canshuuraadka, si ay u yareyso baahida loo qabo adeega bulshada iyo iwm.
Dowlada Puntland waxay si joogta ah ugu hawlantahay Muwadininta, Ganacsatada iyo Shaqalahba in ay ka saarto bahida ay u qabaan adeega bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Hadaba si ay u hirgaliso una dardargaliso dawlada arimahaas oo dhan waa in maxaliga, Ganacsatada, iyo Shacabka oo dhan ku taageero bixinta canshuraadka kuwasoo lagu hormarindoono adeega Caafimaadka, Wadooyinka, Dhismooyinka dowlada, Dhismooyinka Sportska, Adeega Booliska, Dabdamiska, Mushaarka Gobalada iyo Shaqalaha Dowlada Hoose, Tayeenta Ciidanka Dalka, Dhaqanka, Warbaahinta, Ganacsiga iyo Warshadaha Arimaha Deegaanka, Cuntada iyo Reer Miyiga.
Akhristow Waxaad tahay Muwaadin Reer Puntland ah. Waxaa waajib kugu ah in aad si hufan ula shaqayso Waaxda Cashuuraha iyo Dakhliga kuwasoo u hawlan ururinta cashuuraadka iyo qarashaadka kale ee lagu ansixyay Sharci Dejinta. Maxaa yeelay, cidna kuma noola meel go’doon ah, qofka wuxu u baahanyahy Biyo, Amni, Sharci, Kala danbeyn, Xoriyad. Hadaba Akhristow ogsonow cashuurtu waxay faa’iido u leedahay adiga Shaqsi ahaantada, qoyskaaga, deriskaaga iyo umada kugu xeeran oo dhan.
Gebogebadii: In kasto Dalku (Somalia) hormar sida uwayn uusan gaarin, hadana cashuurta waa lagama maarmaan. Aduunka iyo bulshada casriga ee heer sare nolosha ka gaaray waxay ku gaareen canshuur bixin iyo u hogaamista nidaamka. Dawlada Puntland waa ku qasab in ay ururiso canshuuraadka si ay u hormariso oogana haqabtirto alaabta iyo adeegyada ay u baahan yihiin muwaadiniinteda.